China AIRCOOL malaza HVLS Large Ceiling Fan Manufacturing and Factory | Kale
Vidiny Avo Fahombiazana Aircool Lehibe HVLS Ceiling Fan
Ny andian-dahatsoratra Aircool dia karazana mpankafy HVLS vaovao novolavolain'i Kale Fans mifototra amin'ny teknolojia PMSM (motera synchronous magnet maharitra); natao ho an'ny toerana ho an'ny daholobe sy ny toerana ara-barotra izy io, mety amin'ny trano fisotroana, trano fisakafoanana, toeram-pisakafoanana, efitrano fandraisam-bahiny, sns. Ny Aircool dia salama, mahazo aina, tia tontolo iainana, mangina ary mitsitsy angovo.
Aircool Series Fans dia mpankafy mitsitsy angovo miaraka amin'ny motera PMSM, savaivony manomboka amin'ny 6ft ka hatramin'ny 10ft raha ny hafainganam-pandeha ambany dia ambany avy amin'ny 110RPM ka hatramin'ny 150RPM, izay afaka mamokatra rivotra be dia be, ny fandrakofana dia hatramin'ny 300 metatra toradroa.
Raha ampitahaina amin'ny mpankafy kely nentim-paharazana sy ny air conditioners, Kale Fans dia manana tombony tsy manam-paharoa: fikojakojana maimaim-poana, mangina, fijery mahafinaritra, mitsitsy angovo, tontolo iainana, rakotra faritra lehibe, fahatsapana aina sns.
Ny mpankafy Aircool Series dia ampiasaina amin'ny sehatra ara-barotra madinika sy salantsalany toy ny gym, club fitness, trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny, birao, tranomboky sns.
Kale Aircool PMSM maotera, manaova fototarazo optimization algorithm mba hilalao ny fitaovana fampisehoana amin'ny fetra, mampiasa simulation teknolojia mba hamolavola ny vahaolana tsara indrindra mba hihaona ny mari-pana ny fangatahana; Optimize ny fampitana fahombiazana sy ny rafitra famolavolana, mampihena ny adin-tsaina haavon'ny, ary ny fiaraha-miasa amin'ny Ny rafitra mampifandray dia natao miaraka amin'ny fepetra fiarovana fiarovana maro mba hiantohana ny fiarovana ny motera PMSM mandritra ny fotoana maharitra. Ny fahadisoana dia ± 10μm ihany mba hiantohana ny fahombiazan'ny ankapobeny, ny fifandanjana mavitrika ary ny faharetan'ny disc rotor, sns.
Ny rafitra fanaraha-maso dia tena tsara, mampiasa teknolojia avo lenta mba hahatonga ny fantson-drivotra aircool manomboka milamina ary rehefa mandeha izy dia ambany dia ambany ny tabataba. Ankoatr'izay, ny rafitra fanaraha-maso dia mety hahatonga ny mpankafy valindrihana hanana fiainana lava. Potentiometer nomerika, knob switch, electrolytic capacitor, mahatonga azy ho mora ny miasa. Fampandehanana mora, mitahiry vola, ezaka ary fotoana!
Ny lelan'ny vokatra dia manangana ny endrika wavy streamline endrika, Nanasa mpamorona Eoropeana sy Amerikana handray anjara amin'ny famolavolana styling iraisam-pirenena. Ankoatra izany, ny lelany mpankafy dia azo ampifandraisina amin'ny loko isan-karazany mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny tontolo samihafa.
0.5Amps / 220V
Manana ekipa injeniera za-draharaha izahay amin'ny elctricity, machanism ary architecture izay hanome ny drafitra fametrahana mety indrindra ho an'ny rafitra samihafa araka ny famakafakana ny adin-tsaina, ary afaka mametraka mpankafy ho an'ny rafitra mahafeno fepetra.
Fantatsika rehetra fa ny intallation dia dingana tena ilaina, ka mandritra izany, ny fitsipika henjana sy ny fenitry ny fametrahana ary ny asantsika dia tsy maintsy manafoana ny fisalasalanao rehetra.
teo aloha: EURUS II ampiasaina amin'ny indostrian'ny valindrihana fan
Manaraka: DIAMOND Energy Saving Ceiling Fan
24ft Hvls Large Fan
China Hvls Fan
Fanofana Haingam-pandeha ambany
Hvls Fan For Gym
Hvls Fan Price
Volom-drivotra lehibe Korea Avaratra Hvls Fan
Fan Hvls lehibe
Feo ambany tabataba Korea Avaratra Hvls Fan
Korea Avaratra Hvls Fan